အမည်မသိသူတွေ သေနတ်နဲ့ လာပစ်ခံရတဲ့အ ကြောင်း ရင်းကို ပြောပြာလာတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ဇနီး – XB Media & News
အမည်မသိသူတွေ သေနတ်နဲ့ လာပစ်ခံရတဲ့အ ကြောင်း ရင်းကို ပြောပြာလာတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ဇနီး
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ရဲ့ သေနတ်နဲ့ လာပစ်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ပြောပြာလာတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ဇနီး
ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ ပြည်သူချစ် အနုပညာ ရှင် တစ်ယောက် ဖြစ် တဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် ဟာ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) နဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ယခု လတ်တလောမှာတော့ တိမ်းရှောင်နေ ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေါက်ဟာ အနုပညာ
လောကထဲမှာ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံကောင်း တစ်ယောက် အနေနဲ့စတင် လာခဲ့ ပြီးတော့ အခု နောက်ပိုင်း မှာတော့ အောင်မြင် တဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ တစ် ယောက် ဖြစ်လို့ နေခဲ့ပါပြီ။ကိုပေါက်ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းမှု စတင် ဖြစ်ပေါ်ကတည်းက
ပြည်သူတွေ နဲ့အတူတစ်သားတည်း တစ်စိတ်တည်း ရပ်တည်ကာ CDM မှာလဲ ပါဝင် ခဲ့ပြီး လူထု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေမှာလဲ ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်ရက်မှ မပြတ် တိုက်ပွဲ ဝင် နေခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ကို ပေါက် အပါအဝင် အနုပညာ ရှင် အချို့ CDM
အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) နှင့် အမှုဖွင့် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လည်း အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်နော်..မကြာခဏလဲ ကိုပေါက်က လွတ်မြောက်နယ်မြေက ပုံလေးတွေ
ကိုလည်း တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်. ဒီနေ့လေးမှာတော့ ကိုပေါက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ နေထိုင်ရာနေအိမ်ကိုသေနတ်နဲ့ လာပစ်သွားတဲ့အကြောင်းကို Live လွှင့်ပြီးပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်…..
.Fans Myay Ni Lan ပရိသတ်ကြီးလည်း ကိုပေါက်ဇနီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ပြီး အားပေးစကားလေး ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်…
Source: Ko Pauk
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ရဲ႕ ေသနတ္နဲ႔ လာပစ္ခံရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ေျပာျပာလာတဲ့ ကိုေပါက္ရဲ႕ဇနီး
ပရိတ္သတ္ႀကီးတို႔ေရ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာ ရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုေပါက္ ဟာ ပုဒ္မ ၅၀၅(က) နဲ႔ အမႈဖြင့္ခံထားရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ယခု လတ္တေလာမွာေတာ့ တိမ္းေရွာင္ေန ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ကိုေပါက္ဟာ အႏုပညာ
ေလာကထဲမွာ ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံေကာင္း တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔စတင္ လာခဲ့ ၿပီးေတာ့ အခု ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္လို႔ ေနခဲ့ပါၿပီ။ကိုေပါက္ဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းမႈ စတင္ ျဖစ္ေပၚကတည္းက
ျပည္သူေတြ နဲ႔အတူတစ္သားတည္း တစ္စိတ္တည္း ရပ္တည္ကာ CDM မွာလဲ ပါဝင္ ခဲ့ၿပီး လူထု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြမွာလဲ ျပည္သူေတြ နဲ႔အတူ တစ္ရက္မွ မျပတ္ တိုက္ပြဲ ဝင္ ေနခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ကို ေပါက္ အပါအဝင္ အႏုပညာ ရွင္ အခ်ိဳ႕ CDM
အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ႏွင့္ အမႈဖြင့္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လည္း အႏုပ ညာရွ င္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္းလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကိုေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္ပါတ ယ္ေနာ္..မၾကာ ခဏလဲ ကိုေပါက္က လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမက ပုံေလးေတြ
ကိုလည္း တင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္. ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ ကိုေပါက္ရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူရဲ႕ ေနထိုင္ရာေနအိမ္ကိုေသနတ္နဲ႔ လာပ စ္သြားတဲ့အေၾကာင္းကို Live လႊင့္ၿပီးေျပာျပလာတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…..
.Fans Myay Ni Lan ပရိသတ္ႀကီးလည္း ကိုေပါက္ဇနီးရဲ႕ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ၾကည့္ၿပီး အားေပးစကားေလး ေရးေပးသြားၾက ပါအုံးေနာ္…
အိမ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒရဲ့သမီးလေးနဲ့ အတူ အချိန်တွေဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်လာ ခဲ့တဲ့စိုးပြည့်သဇင်
မြင်ရသူတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ သားမိနှစ်ယောက် V call ပြောနေပုံလေးကို တင်ပေးလာတဲ့ ချမ်းချမ်း